“ ဘဝကို စာမေးပွဲစစ်ခြင်း ” | လောကမီးအိမ်
“ ဘဝကို စာမေးပွဲစစ်ခြင်း ”
Posted by ညီညီ on May 7, 2010
(အဟဲ .. ဘာမှတော့မဟုတ်ပါ .. လာတက်စ်တဲ့သူရှိလို့ အားတင်းရေးလိုက်တာ .. ပထမဆုံးတက်ပို့ စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားရှိရင် နားလည်ပေးကြပါကုန်တော့ ဘော်ဘော်တို့ ရေ….)
♦♦♦ ဘဝမှာ ဘာအဓိကလဲလို့ မေးလာရင် သင်ရဲ့ အဖြေက ဘာလဲ..?????(၁)စီးပွားရေး(၂)လူမှုရေး(၃)ပညာရေး(၄)အချစ်ရေး(၅)နိုင်ငံရေး
♦♦♦ …$……₤……฿……ရေးပေါင်းများစွာထဲက သင့်ရဲ့ အဖြေကဘာလဲ …??? အရင်တုန်းကတော့ ဘဝကိုပေါ့ပျက်ပျက်ရယ်သွမ်းသွေး လောကကြီးကိုအလေးမထားတဲ့ ကောင်လေးတွေထဲမှာ ကျွှန်တော်(ညီညီ)လည်း အပါအဝင်ပေါ့ ..(ဘော်ဘော်တို့ ရော) … မွေးလာကတည်းက စပြောရရင်
♦♦♦ ဘာမှမသိ …………… (ကလေးကိုးဗျ)…နည်းနည်း အသက်(အတတ်)ရလာတော့ (လူလယ်ပိုင်းကိုပြောတာပါ) ပညာရေးကစတင်ပြီး လူမှုရေးကို အနည်းငယ်နားလည်လာတယ် …လူမှုရေးကတော့ လူငယ်ချင်းချင်းခင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးထဲမှာ(၁၀နှစ်)ကြာလေလွင့်နေခဲ့တယ် …. ပြောရရင်တော့ ဘာမှမရှိသေးတဲ့ အသိပညာနဲ့ မာန်မာနကိုရှေ့ ထားပြီး “ငါကွ” ဆိုပြီး လူကြီးတွေရဲ့ စကားအောက်က ရုန်းထွက်ချင်တဲ့အချိန်လေးပေါ့ …အဟဲ…
♦♦♦ အခုကျွှန်တော် အသက် ၂၆နှစ်ရှိပါပြီ … ဘဝကိုစာမေးပွဲတစ်ခုလို သဘောထားပြီး အစွမ်းကုန်ဖြေနေရတဲ့ အချိန်ရောက်ပြီလို့ လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ် ယူဆထားတယ် … အခုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စာမေးပွဲစစ်ကြည့်တယ် …ပညာရေးနဲ့ ပက်သက်ရင်တော့ သိပ်ကံမကောင်းခဲ့ပါ … ဆိုလိုတာက စာသင်ကြားခွင့်အတိုင်းအတာ တိုတောင်းတာကိုဆိုလိုတာပါ …(ကျောင်းမှာ အမြဲအဆင့်(၁)(၂) ကနေပြေးမလွတ်ဘူးဗျ .. ကြွားတာမဟုတ်ဘူး .. အဟဲ .. စာစစ်စာမေးပွဲတင်မဟုတ် …အကုန်လုံးမှာပါ ….အဲဒီအကုန်လုံးဆိုတာ ဘော်ဘော်တို့ လည်းသိမှာပါ … ကျောင်းသားဘဝမှာ) …… ♦♦♦(၁၀)တန်းကို အောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်း ပညာရေးနယ်ကနေ ခုန်ထွက်ပြီး ဘာမှမသိသေးတဲ့ နယ်ပယ်ထဲမှာ ခြေချတယ် …ဘာမှမသိဆိုတာက စီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့ လည်းမဟုတ် ဟိုမဟုတ်ဒီမဟုတ်တဲ့ အနေအထားကိုပြောတာ ….အဲဒီမှစတွေ့ တာ … “ငါကွ”ဆိုတာကြီးက ဒီအချိန်ကျမှ ဘယ်နားရောက်နေလဲ မသိ … အင်း ….ကဲ..ဘော်ဘော်တို့ ရေ … အခုမှ ပညာရေးနယ်ကထွက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းနယ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ ညီညီတစ်ယောက် …ရှေ့ မှာက အနာဂတ် … မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့… အဲ … သိုင်းကားတွေထဲကလိုပဲ … မထိုးတတ် မခွတတ်နဲ့ ညီညီတစ်ယောက် အလူးအလဲပေါ့ …. အဲဘာရမလဲဗျ … ကျွှန်တော်လည်း သိုင်းသင်ရပေါ့ဗျ … ဒီနယ်ထဲရောက်မှစကားဆန်းဆန်း တစ်ခုကိုတွေ့ လာတယ် … “မိတ်ဆွေ”တဲ့ ... အဲ … သူငယ်ချင်းတော့ မဟုတ် …အနည်းငယ်ကွာတယ် … အဲဒီမိတ်ဆွေတွေ ဆိုတာနဲ့ ကျင်လည်ခဲ့ရက အခုမှ “ငါကွ”ဆိုတာကြီးကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ရေရွတ်နိုင်တယ် …
♦♦♦(ချွင်းချက်) ….. အဲဒီမိတ်ဆွေထဲမှာ ကောင်းသူဆိုတာရှိသလို မကောင်းသူဆိုတာလည်းရှိတယ် …အဲဒီမှာမှ ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ ခဲ့တဲ့ ကျွှန်တော် ကံကောင်းတယ်လို့ ပဲဆိုရမယ် …လူငယ်များအတွက်ဒီအချိန်သည် အရေးကြီးသည် … မိမိရဲ့ အနာဂတ်အတွက် လမ်းရွေးချယ်ရမယ့်အချိန်မှာ အဲဒီမိတ်ဆွေကြီးတွေကထိပ်ဆုံးထိရောက်အောင်တွန်းပို့ ပေးနိုင်သလို အောက်ဆုံးထိကျအောင် (ပြန်မတက်နိုင်လောက်အောင်) တွန်းချနိုင်ကြတယ် …ကိုယ့်ဒူးကိုယ့်ချွန်တော့ ရှိပါရဲ့ … ဒါပေမယ့် လူဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ရပ်တည်လို့ မရဘူးဆိုတာ ဘော်ဘော်တို့ လည်းသိပါတယ် … ♦♦♦ အဲအခုတော့ ညီညီတစ်ယောက်လမ်းစကို ရှာတွေ့ ပါပြီ … လမ်းစလို့ ဆိုလိုသည်မှာ အနာဂတ်ကြီးကို အံတုဖို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ချဖို့ အသိအတတ်တွေ နည်းနည်းရှိလာပြီလို့ ဆိုလိုတာပါ … “ဘဝဆိုတာ လူမသေပွဲမပြီးဘူးဗျ ”… ကိုယ်ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ တွန်းလှန်းနိုင်ခဲ့လဲ …ဘယ်အတိုင်းအတာထိမှာ ဘယ်လိုအနေအထားနဲ့ အဆုံးသတ်သွားတယ် ဆိုတာပဲရှိတယ် … အဲဒီတော့ကျွှန်တော်တို့ တွေ ဘယ်လောက် ဘယ်အတိုင်းအတာထိမှာ ဘယ်လိုအနေအထားနဲ့ အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါလေ …
♦♦♦ သင့်ဘာလုပ်ချင်ပါသလဲ … သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာကို ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားနေရင် ဘာမှဖြစ်မလာဘူး …ဗေဒင်တွေ သွားမမေးနဲ့… သင့်အလုပ်ကို သင်အလုပ်ချင်ဆုံးအချိန်မှာ လုပ်တာဟာ အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ … နောက်တစ်ခုလက်ခံထားတာက အပြုံးကိုသာ လက်ကိုင်ဆောင်ပါ … ရလာတဲ့ ဘဝအတိုင်းအတာတိုတိုလေးမှာ ရန်သူတွေပဲများနေတယ်ဆိုရင်အနာဂတ်သည် ဝေးသထက်ဝေး … လမ်းဘေးစကားတွေကို ခေါင်းထဲမထားပါနှင့် … ကိုယ်နှင့်မသက်ဆိုင်တဲ့ စကားကို ဆိုလိုတာပါ …တွေ့ သမျှကြားသမျှတွေသာ လိုက်ပါခံစားနေမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် အချိန်သည် နည်းနည်းပါးသွားလိမ့်မည် … ♦♦♦ ဘဝမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စာမေးပွဲ ခဏခဏစစ်ပေးပါခင်ဗျာ ♦♦♦
♦♦♦ဒီတော့ ကျွှန်တော်(ညီညီ)တစ်ယောက်လည်း ဘဝမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စာမေးပွဲစစ်စစ်ရင်းနဲ့တခါတလေလည်းကျ … အလူးအလဲပြန်ထပြီးရှေ့ ဆက်နေပါကြောင်း ♦♦♦
← Aqua real 2	PC Games များဒေါင်းလုပ်(Mediafire) ကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် … →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...